Izizathu zokuthi kungani sithanda umatilasi oqinile ngaphandle kwemithombo | Rayson
Izizathu zokuthi kungani sithanda umatilasi oqinile ngaphandle kwemithombo
Ngakho-ke isebenza ngendlela efanayo ngezinkathi ezimbili zonyaka, kepha munye ukusabalalisa ukushisa kanti okunye ukusabalalisa ukuphola. Enye into ongayibuka yile: Uphahla lweLao lune-vent empeleni i-solar, ijikeleza i-fan, izungeza ngenkuthalo ukushisa kusuka e-attic, bese idlulisa kahle umoya opholile ungene kusofa.
Ibhodi le-ASC lifakwe ngokuqinile esiqwini. I-wiring ye-motor Side ixhumeke endaweni efanelekile ekhonjiswe kumdwebo we-wiring wesinyathelo 1. Amabhethri abuyiselwa esikhundleni sawo futhi axhunywe kwi-diverter ohlangothini olubi futhi osohlangothini oluhle. Ngisebenzise i-push.
Uzokhathala ngokushesha olwandle. Lapho umdlali ekhathele, zonke izinhlobo zokulimala zivame ukwenzeka ngaphezulu. Ngakho-ke, abantu futhi bacabanga ukuthi bavame ukulimala otshanini. Umdlalo usushintshile. Ebholeni, kungashukumisela ngokushesha. Ngakho-ke, kuthiwani ngesilinganiso sokulimala otshanini? Ngabe baphakeme kakhulu kunotshani?